15+ Thuốc diệt Ốc Sên gốc tự nhiên có lợi cho cây trồng | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Đang Đọc: 15+ Thuốc diệt Ốc Sên gốc tự nhiên có lợi cho cây trồng | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Inkumba badla amagqabi, ngakumbi amagqabi amatsha aluhlaza, alala ngokukhawuleza xa kunetha imvula. Iinkumba zihlala zikhasa ukuze zitye kakhulu ebusuku, emini zihlala zizimela ngononophelo olukhulu.
Ukukwazi kwabo ukutshabalalisa kukhawuleza kakhulu kwiintsuku nje ezimbalwa, ngoko ke ukuba akukho ndlela yokuthintela ngexesha elifanelekileyo, iya konakalisa kakhulu izityalo.
1 Iimpawu ezinobungozi zeenkumba
2 Indlela yokubulala iinkumba ngeemigibe
2.1 1. Phatha iinkumba ngomgibe we-watermelon peel
2.2 2. Bulala iinkumba ezinemigibe yebhiya
2.3 3. Nyanga iinkumba ngamanzi eCoca
2.4 4. I-snail trap ene-orange peel
2.5 5. Eminye imigibe efanayo yenkumba
3 Indlela yokulahla iinkumba
3.1 1. Sebenzisa ixolo lokulawula kunye ne-sawdust
3.2 2. Sebenzisa amanzi kunye nebala lekofu
3.3 3. Sebenzisa umhlaba wediatomite
3.4 4. Ufefe umgubo wekalika
3.5 5. Ukusebenzisa ubhedu
3.6 6. Sebenzisa igalikhi
4 Inkumba iyeza elikhethekileyo
5 Amanyathelo okulima ukukhusela iinkumba
Iimpawu ezinobungozi zeenkumba
☑ Iinkumba luhlobo lwemoluska (mollusks), ezinye zinamaqokobhe kwaye ezinye azinawo. Intloko ineentente ezi-2 (amabhovu), umzimba wonke ugqunywe ngumaleko wencindi.
☑ Njengezilwanyana zasendle, ngexesha elishushu zikholisa ukugrumba emhlabeni, zizimele emingxunyeni, zizifihle phantsi kwamagqabi, amatyholo okanye ngaphantsi kweembiza.
☑ Kwiindawo ezihlala kuzo zendalo ngexesha lonyaka elomileyo, bangalala iinyanga, kodwa kuthatha kuphela ishawa (ngokuqhelekileyo entlakohlaza) ukuze basebenze ngokwesiqhelo.
☑ Iinkumba zihlala zithanda ukutya iindawo ezincinci zezityalo ezinje ngamagqabi amatsha, amagqabi asanda kuntshula… Iintlobo ezimbini zelotus ezinde nezingenanto njengoko kubonisiwe emfanekisweni zezona zinzima ukunyanga, ngenxa yenani elikhulu kwaye kunzima ukuziqwalasela. .
Indlela yokubulala iinkumba ngeemigibe
Le ndlela isebenza kwiigadi ezincinci zemifuno, ukukhula kwemifuno kwintsapho, kwi-slugs engenanto kunye neentlobo ezincinci ze-shell.
1. Phatha iinkumba ngomgibe we-watermelon peel
Oku kunceda ukubamba iinkumba ngaphandle kokuzibulala. Ukuba ungumlimi kwaye awufuni ukubulala, ungasebenzisa le ndlela yokubamba iinkumba kwaye uzikhulule kwenye indawo.
Inyathelo loku-1: Sika irandi levatala libe ngamaqhekeza amancinci aphakathi, umqolo kufuneka ube nenyama ebomvu eswiti ukutsala iinkumba.
Inyathelo lesi-2: Beka i-watermelon rind ujikeleze isiseko semifuno ukuze umphezulu we-rind ulingane nomhlaba, ukuze iinkumba zibe lula ukukhasa phezulu. Ngenxa yokuba iinkumba zinokuvumba ukutya kuphela kuluhlu olumxinwa, kuyimfuneko ukubeka iipods ezininzi ze-watermelon.
Kufuneka ubeke umgibe wenkumba emva kwemini epholileyo, malunga ne-16-17h.
Inyathelo lesi-3: Phuma ngentsimbi ye-9pm ukujonga ukusebenza komgibe, ukuba kukho iinkumba, ungaziqokelela, emva koko ubuyisele iirindi zevatala ukuze ubambe kwakhona. Unako kwakhona ukuqokelela iinkumba kusasa, kodwa kufuneka uvuke kwangethuba, ukuba ushiywe lixesha, iinkumba ziya kukhasa.
Phawula: Amaqhekeza evatala asalungile anokugcinwa ukuze abanjwe ngakumbi. Indlela ekhawulezayo yokuqokelela iinkumba kukuntywila amaqhekeza evatala emanzini, aya kuhlukana ngokwawo.
2. Bulala iinkumba ezinemigibe yebhiya
Le ndlela inceda ekubambeni nasekubulaleni iinkumba, sebenzisa naluphi na uhlobo lwebhiya kwaye indlela ilula kakhulu.
Inyathelo loku-1: Sebenzisa iipleyiti ezincinci (uhlobo lwesosi) ezibekwe kufutshane nemifuno ukuze ipleyiti ilingane nomhlaba ukuze iinkumba zibe nokukhasa ngokulula.
Ekubeni iinkumba ziphunga kuphela kuluhlu olumxinwa, izitya ezininzi kufuneka zibekwe.
Inyathelo lesi-2: Galela ibhiya kwisitya malunga ne-1/2 ukuya kwi-2/3 yeplate. Kufuneka umgibe emva kwemini epholileyo ukusuka kwi-16-17h.
Inyathelo lesi-3: Ngokuhlwa, unokuphuma ukhangele ukuba umgibe uyasebenza, uqokelele iidiski ekuseni, ulinde kude kube yimini ukuseta umgibe kwakhona.
Phawula: Musa ukuphinda usebenzise ibhiya ebanjisiweyo kuba iyancipha incasa yayo kwaye ayisenamtsalane kwiinkumba.
3. Nyanga iinkumba ngamanzi eCoca
Iinkumba ezifana neelekese kunye nevumba elimnandi, ngoko ke iCoca nayo iba yinjongo yazo. Sikwaqhuba imigibe yenkumba nge-coca efana nebhiya. Kodwa oku kusebenza kwiinkumba ezinkulu.
Inyathelo loku-1: Beka izitya ezinkulu kwigadi engasemva, ukuze isitya silingane nomhlaba ukuze iinkumba zibe lula ukukhasa.
Inyathelo lesi-2: Galela i-coke ephakathi 1/2 ukuya kwi-2/3 isitya. Elona xesha lilungileyo lokugalela i-coke kukutshona kwelanga (kumnyama nje).
Inyathelo lesi-3: Ngentsasa elandelayo, qokelela iinkumba ezibanjisiweyo.
4. I-snail trap ene-orange peel
Indlela yokuyenza iyafana nale ingasentla, ngoko ke andisafuni miyalelo ithile. Emva kokuba i-orenji inqunyulwe phakathi, icudiswe ukufumana ijusi, ishiya ixolo kunye nefayibha ngaphakathi, isetyenziselwa ukubeka kwigadi yemifuno ukuze umlomo we-orenji ulingane nomhlaba ukuze iinkumba zibe lula ukukhasa ngaphakathi. .
Kufuneka ukhethe iiorenji eziswiti, iinkumba ezithanda zona ngcono. Beka imigibe ngokuhlwa, uqokelele ebusuku okanye kusasa. Le ndlela isebenza kwimibhobho engenanto kunye neengqungquthela ezincinci.
5. Eminye imigibe efanayo yenkumba
Izibatha ze-snail ngokwendlela kunye nexesha ziyafana, kuphela izinto ezisetyenzisiweyo zahlukile. Ke ngoko, ukuba unika yonke imiyalelo, kuthatha ixesha elininzi.
Ukongeza kwiindlela ezi-4 ezichazwe ngasentla, unokutshintsha izinto zomgibe kunye nekhukhamba, amaqabunga e-hibiscus, i-peel kunye ne-fiber ye-jackfruit, ubusi … ezi zonke ziyizithako ezikhangayo kakhulu kwimingxuma.
Enye indlela yokuphelisa inkumba kukukhuthaza amanye amarhamncwa asegadini ukuba atye iinkumba. Ezi zilwanyana ziquka amaxoxo kunye namasele onokuthi “uwameme” egadini yakho ngezindlu zamasele edongeni.
Ukongeza kwiintaka ezininzi (ingakumbi iirobin), iifudo, iinyoka ezinemigca, kunye ne-salamanders nazo ziyaziwa ngokunandipha ukutya iinkumba.
Indlela yokulahla iinkumba
Ukongeza ekubekeni imigibe ukubamba iinkumba okanye ukusebenzisa izibulala-zinambuzane, ungasebenzisa enye indlela yokuzigcina kude nezityalo.
Nangona kunjalo, ezi ndlela zihlala zingacokisekanga, ngakwelinye icala, azisetyenziswanga kwiimbiza zebhonsai, kuba le ndawo iyindawo yentolongo, ngoko ke iinkumba aziyi kukwazi apho ziya khona, ziya kufihlakala.
1. Sebenzisa ixolo lokulawula kunye ne-sawdust
Amaqanda, emva kokusetyenziswa, aqokelelwa, aqhekezwe abe ngamaqhekeza, aze afafazwe emhlabeni malunga nesiseko somthi. Amaqokobhe amaqanda anencam ezibukhali kwaye ayayicaphukisa imizimba yenkumba ethambileyo, ngoko ke ayakuphepha ukurhubuluza kumaqokobhe ukukhwela emithini.
Ayiphelelanga apho, iqokobhe leqanda likwanekhalsiyam, litsho libe sisichumisi esinesondlo somhlaba. I-Sawdust inefuthe elifanayo.
2. Sebenzisa amanzi kunye nebala lekofu
Thatha amanzi ekofu apholileyo uwafake kwibhotile yesitshizi emva koko uwatshize ngokuthe ngqo emagqabini, emhlabeni, nkqu neenkumba.
Iindawo zekofu ezilahliweyo zifafazwe malunga nesiseko somthi kunye nomhlaba ukufaka izondlo emhlabeni. Le yindlela yokugxotha kwaye Ukutshabalalisa iinkumba iphandwe liSebe lezoLimo laseMelika.
3. Sebenzisa umhlaba wediatomite
Umhlaba weDiatomite lilitye elingumgubo elisuka kwiintsholongwane zaselwandle. Le nto inamacangca amancinci kwaye inobungozi kwi-mollusks.
Umhlaba weDiatomite unokutshizwa emhlabeni ujikeleze isityalo kunye neentyatyambo. Nangona kunjalo, ukusebenza kwale ndlela kuya kuncipha xa umhlaba umanzi, ngoko kufuneka ufefe umaleko omtsha womhlaba we-diatomite emva kokunkcenkceshela izityalo okanye emva kokuna kwemvula.
Kwaye kufuneka ubeke ingqalelo yokuthenga uhlobo olufanelekileyo lokutya kwe-diatomite, okungeyona inetyhefu.
4. Ufefe umgubo wekalika
Ukusabalalisa i-lime powder emhlabeni, izityalo ezifakwe emanzini okanye phezulu kwebhodwe kufuphi nesiseko somthi, usasaze amaxesha angama-2-3 ngenyanga.
Ungasebenzisa kwakhona ityuwa, kodwa ityuwa yetyuwa inokuchaphazela izityalo, ngoko qaphela ngakumbi.
5. Ukusebenzisa ubhedu
Ngenxa yokusabela phakathi kwesinyithi kunye ne-mucus (i-viscous) ngenxa inkumba efihliweyo xa uhamba. Le mpendulo ivelisa umqondiso wemithambo-luvo ongemnandanga kakhulu kwinkumba, ngokusisiseko njengomothuko wombane, ngoko ke iyakwazi ukugxotha iinkumba kakuhle kakhulu.
Ukwenza: Thenga umqulu weteyiphu yobhedu kwindawo yokukhulisa izityalo kwaye uyisongele kwigadi yemifuno okanye ibhedi yeentyatyambo, okanye unokubeka ngokulula iingqekembe ezimbalwa zobhedu kwisiseko somthi ukuze ukhuselwe.
6. Sebenzisa igalikhi
Uphononongo lwakutsha nje lwezazinzulu kwiYunivesithi yaseNewcastle, UK, iinkumba ziya kukhukuliseka ngaphandle kwegadi yakho ukuba kukho izityalo ezimbalwa zegalikhi egadini. UGqr Gordon Port, owayekhokele olu phando, uthe ioyile yegalikhi inokubulala neenkumba.
Ngokukodwa, xa udibana negalikhi, inani le-slime ngenxa inkumba imfihlo ngequbuliso spike kwaye “zibonakala dehydrated”. Wayekrokrela ukuba lo mcimbi wawusisiphumo senkqubo yeoli yegalikhi esebenza kwinkqubo yemithambo-luvo yenkumba, kodwa iimvavanyo azizange zinike ubungqina obaneleyo bokuxhasa oku.
Thatha malunga ne-10 bulbs yegalikhi, utyumze, ucofe amanzi, udibanise ne-2 iikomityi zamanzi. Le ithamo inokutshintshwa ngokuxhomekeke kubuninzi kunye nommandla wezityalo.
Galela kwibhotile yokutshiza kwaye utshize kwizityalo, iintyatyambo, kunye nemifuno njengento egxotha indalo ye-slugs kunye ne-slugs.
Inkumba iyeza elikhethekileyo
Ngokutsho kukaGqr. Nguyen Thi Nhung (Owayesakuba yiNtloko yeSebe leMithi, ukhula kunye nokusiNgqongileyo – iZiko loKhuseleko lweZityalo), xa iinkumba kufuneka zitshize uhlobo oluchanekileyo lwamachiza, amachiza abhalisiweyo ngokukodwa ukulawula iinkumba.
Yiya kwivenkile kwaye ucele ukuthenga iziyobisi eziqulethe izithako ezisebenzayo iCypermethrin okanye iCaffeine + Nicotine Sulfate + Azadirachtin okanye iSaponin.
Nangona kunjalo, kubalulekile ukujonga ichiza elichanekileyo elibhalisiweyo ngaphandle kweenkumba, kuba ezinye iziyobisi eziqulethe izithako ezisebenzayo ezingentla kodwa azibhaliswanga ngaphandle kweenkumba nazo zingasebenzi.
Qaphela: Ukusetyenziswa kweziyobisi ukubulala iinkumba kusebenza kuphela kwizitiya ezinkulu zemifuno. Nangona kunjalo, asiyikucebisa ukusetyenziswa kweziyobisi, ukuba iindlela eziphilayo zingasetyenziswa, kufuneka zisetyenziswe.
Amanyathelo okulima ukukhusela iinkumba
Iinkumba zikhula phantsi kweemeko ezimnyama, ukungabikho kokukhanya, umhlaba omanzi… Ngoko ke, hlala ugcina igadi ingena umoya kwaye yomile. Kwakhona kunokwenzeka ukuba ufefe i-lime powder kwi-groove yebhedi yemifuno.
1. Guqula ishedyuli yokunkcenkceshela
Yenza inkumba Ikhetha umhlaba ofumileyo njengoko iza kuhamba ngokulula nangokukhawuleza kumhlaba ofumileyo.
Ke tshintsha nje ixesha lokunkcenkceshela libe kusasa endaweni yasemva kwemini okanye ngorhatya, uya kuqinisekisa ukuba umhlaba womile kancinci phambi kokuba kuhlwe.
Oku kuya kwenza ukuba kube nzima kakhulu ukuba iinkumba zihambe, kwaye ngokwenene zinokunciphisa inkangeleko yazo ukuya kuthi ga kwi-80%.
2. Coca inkunkuma phantsi komthi
Inkumba Bathanda ukuzimela kwii-nooks kunye neekrani ezinokuzifumana, ngoko kufuneka ucoce i-debris phantsi kwemithi kunye neentyatyambo. Ngale ndlela inkumba iya kutyhilwa kwaye ayifuni kuhlala apho kwakhona.
3. Khulisa izityalo ezigxotha iinkumba
Kukho izityalo ezithile, iintyatyambo, kunye nemifuno ekuthiwa icaphukisa iinkumba, ngoko unokufuna ukucinga ngokuzongeza kwigadi yakho. Phakathi kwazo kukho iintyatyambo ezifana ne-freesia, i-dandelion, i-rhododendron, i-foxglove, i-chrysanthemum, i-hibiscus, imifuno efana ne-mint, i-rosemary, i-dill, i-parsley kunye ne-basil.
4. Rhoqo uhlakulele umhlaba ojikeleze umthi
Oku kuya kutshabalalisa onke amaqanda enkumba emhlabeni. Oku kunokunciphisa inani leenkumba kamva.
5. Yongeza izinto zokuhombisa
Sebenzisa izixhobo zokulungisa umhlaba ezinje ngamaplanga kunye negrabile. Izinto ezithile ezinjengamaplanga, igrabile, nesanti zenza kube nzima ukuba iinkumba zikhwele phezu kwazo yaye zinokuzithintela ukuba zingazaleli egadini.
Eli nqaku libhekiselwa kwiitshaneli zeYouTube ezifana neQuoc Thinh Le kunye noNam Rau